एजेन्सी- मुकेश अम्बानी सम्बन्धित समाचारहरु भारतीय मिडियाहरुले प्राथमिकताको साथ प्रकाशित गर्ने गर्छन्, अहिले भारतीय मिडियामा मुकेश अम्बानीको छोरीको इन्गेजमेन्टको विषयले राम्रै ठाउँ पाइरहेको छ।
मुकेश अम्बानीको छोरी ईशा अम्बानीको इन्गेजमेन्ट आनंद पीरामलसँग आज हुँदैछ। एसियाकै एक धनि परिवारको सदस्यको इन्गेजमेन्टले धेरै ध्यान तान्नु स्वाभाविकनै हो।
इन्गेजमेन्टका कार्यक्रमहरु इटालीमा रहेको लेक कोमोमा हुँदैछ। इन्गेजमेन्टका कार्यक्रमहरु लगभग तीन दिन चल्ने बुझिएको छ। इन्गेजमेन्टका 21 देखि 23 सेप्टेम्बरसम्म चल्ने भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्।
यस इन्गेजमेन्ट कार्यक्रम २३ सेप्टेम्बरको दिन एक शानदार भोजसँगै सकिने बुझिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार आनंदले महाराष्ट्रको महाबलेश्वरमा प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए।
यी दुई बीच इन्गेजमेन्ट गराउन मे महिनामा भएको एक निजी कार्यक्रममा अम्बानी परिवारले घोषणा गरेको थियो। इटालीमा हुने इन्गेजमेन्टका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन आउने पाउनाहरुलाई महँगा होटलहरुमा स्वागत गरें अम्बानी परिवारको तयारी रहेको छ।
Lake Como को Villa Balbiano मा पाहुनाहरुलाई आज डिनरको व्यवस्था रहेको छ भने शनिबार Villa Olmo मा पाहुनाहरुलाई डिनरको व्यवस्था गरिएको छ। अम्बानी परिवारले आफ्नो छोरीको विवाह ज्यादै धुम-धामका साथ गर्दैछ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज ०५, २०७५१८:१७
हिजो साँझ खोलाले बगाउँदा वृद्धको मृत्यु !
राष्ट्रपतिको गाडी खरिद प्रकरणलाई लिएर नेकपा र कांग्रेस सांसदबीच विवाद !
वर्षाले क्षतिग्रस्त सडक जनप्रतिनिधिद्वारा मर्मत !
प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसको नाराबाजी !